फोक्सो रोग विशेषज्ञ डा. नवीन मिश्रको सल्लाह : फोक्सोलाई यसरी स्वस्थ राखौं - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ फोक्सो रोग विशेषज्ञ डा. नवीन मिश्रको सल्लाह : फोक्सोलाई यसरी स्वस्थ राखौं
फोक्सो रोग विशेषज्ञ डा. नवीन मिश्रको सल्लाह : फोक्सोलाई यसरी स्वस्थ राखौं
डा. नवीन मिश्र फोक्सो रोग विशेषज्ञ | काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल । आईतबार, २०७७ भदौ २८ गते, १०:३८ मा प्रकाशित
फोक्सोको प्रमुख काम भनेको शरीरमा भएका कोषिकालाई अक्सिजन प्रदान गर्नु हो । यसमा देखिएको केही गडबडी तथा असन्तुलनले मात्रै पनि व्यक्तिमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या देखा पर्दछ ।
हामी प्रत्येकको शरीरमा प्राकृतिक रक्षा प्रणाली रहेको हुन्छ । जसले फोक्सो बचाउको काम समेत गर्ने गर्छ । अधिकांश समय यसले बाह्य फोहोरलाई फिल्टर गरी किटाणुहरु विरुद्ध लड्ने काम गर्दछ । यद्यपि, त्यस्ता किटाणु तथा हानिकारक पदार्थले व्यक्तिको श्वासनलीमा क्षति पु¥याएमा प्रतिफल स्वरुप यसले फोक्सोको नियमित कार्यप्रणाली र क्षमतामा समेत हानी पु¥याउँछ । जसले कालान्तारमा फोक्सोको रोगसमेत निम्त्याउने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसकारण हामीले फोक्सोको स्वास्थ्यमा उचित ध्यान दिनुपर्दछ ।
सामान्यतयाः हामीमध्ये अधिकांशको बानी के छ भने कम्तिमा श्वास फेर्न गाह्रो नभएसम्म हामी फोक्सोको स्वास्थ्य तथा महत्वलाई त्यत्ति ध्यान दिदैनौं । फोक्सोको स्वास्थ्यको विषयमा त्यत्ति धेरै सोच्दैनौं । यद्यपि, सबैजना स्वस्थ जीवनशैली बिताउन फिट रहन भने चाहन्छन् ।
वर्तमान समयमा संसारभर फैलिएको कोभिड—१९ ले विश्व नै आक्रान्त बनाएको अवस्था छ । कोरोना भाइरसले दीर्घ रोग तथा प्रतिरोध क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई तुलनात्मक रुपमा बढी असर गर्छ भन्ने तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत बताउँदैं आएको छ । सार्स–कोभ–२ भाइरसका कारण हुने यस संक्रमणले सर्वप्रथम व्यक्तिको फोक्सोमा असर पु¥याउँछ । जसकारण अधिकांश संक्रमित व्यक्तिमा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धि समस्या देखा पर्नुका साथै कसै—कसैमा भने यसले दीर्घ फोक्सो–समस्यालाई समेत निम्त्याउँछ ।
यस संक्रमणबाट बच्न तथा आफूमा कोरोना संक्रमण देखिएमा यसले फोक्सोमा धेरै असर नगरोस् भन्नका लागि पनि आफ्नो फोक्सोलाई स्वस्थ राख्नु आवश्यक छ । यसका लागि हामीले निम्न पक्षहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्छः
धुम्रपान तथा धुम्रपान गर्ने वातावरणबाट समेत टाढा रहने
धुलो–धुवाँजन्य वातावरणमा सकेसम्म नजाने वा जानैपर्ने अवस्था आए अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने
शारीरिक रुपमा सक्रिय रहने र नियमित व्यायाम गर्ने
व्यायाम गर्दा लामो–लामो सास फेर्ने
एरोबिकजस्ता कसरत गर्ने
उचित पौष्टिक आहारको सेवन गर्ने
नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने
बाहिर निस्कँदा धेरै हुलमुल हुने समयमा ननिस्किने । जस्तोः बिहान ९/१० बजेतिर अफिस समय हुने भएकोले अधिकांश यस समयमा बाहिर निस्कन्छन् । तसर्थ यस्तो अवस्थामा आफू उक्त समयभन्दा अघिपछि निस्किने
र, आफ्नो घर वरपर बोटविरुवाहरु रोप्ने ।
यसबाहेक विशेषगरीः कोभिड—१९ को संक्रमणबाट बच्नका लागि हामीले ‘एमडिएच’ फर्मुला अपनाउनु पर्दछ । ‘एम’ भन्नाले मास्क, ‘डि’ भन्नाले डिस्ट्यान्स (सामाजिक दूरी) र ‘एच’ भन्नाले ह्यान्ड स्यानिटाइजिङ (हात स्वच्छ राख्ने) भन्ने बुझिन्छ ।
यसैगरी कोरोनाका अधिकांश केशहरु लक्षणविहिन देखिएकोले यो जो कोहीमा जुनसुकै स्वरुपमा पनि देखिन सक्छ । कसैमा पखाला लागेको हुनसक्छ भने कसैमा सुगन्धको शक्तिमा कमी आएको हुनसक्छ । यस्ता पक्षलाई प्रत्येक व्यक्तिले खासै ख्याल गरेको हुँदैन । त्यसकारण यस्तो पक्षमा विशेष सर्तकता अपनाउनुपर्छ ।
यस्तै कुनै पनि संक्रमणले व्यक्ति विशेष नहेर्ने भएकोले यो तपाई, हामी र हाम्रो चिनजान तथा आफन्त जो–कोहीमा पनि देखिन सक्छ । त्यसैले यस्तो समयमा सकेसम्म भोज–भतेरमा नजाने, सामूहिक भेटघाट नगर्ने, टेलिफोनको माध्यमबाटै एकअर्काको सम्पर्कमा जोडिने, भिडभाडबाट टाढै रहने, जथाभावी नछुने र विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, मन्त्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड—१९ बाट बच्न दिएको मापदण्डहरुलाई उचित रुपमा अनुशरण गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधिले कोभिड—१९ को संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्नुका साथै फोक्सोलाई क्षतिबाट समेत बचाउँछ ।
अन्त्यमा, हामीमध्ये कसैले पनि कोरोनालाई हल्का रुपमा लिने गल्ती गर्नुहुँदैन । कोरोना संक्रमितले भने आफूमा ढृढ सकरात्मक सोच राख्दै यस रोगविरुद्ध लड्नुपर्छ । र, १ सय ४ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएको व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहमा कोरोना परीक्षण गराउनु उचित रहन्छ ।